Eritreritr'i Poseidonn - Namana Serasera.org
Poseidonn 09/09/2015 08:03
Tsy hay ny tsy hiteny manoloana ireny horonantsary maneho ny famonoana Vehivavy Malagasy tamin'ny fomba feno habibiana tany Koweït ireny. Fa dia inona loatra no fiheveran'ireto olona hafa firenena ireto ny vehivavy Malagasy??? Tena mahatsiaro tena ho miraviravy tanana ny tena manoloana ireny zavatra ireny ary mino aho fa tahaka izany ihany koa ny fanjakana Malagasy izay mampiseho fahalemena tsy roa aman-tany.
Mandrapahoviana no hisy ny zavatra toy ireny??? Inona ny andraikitra tokony horaisina??? Tokony hosakanana ve ny Malagasy tsy hiasa any ivelany any SA tokony ho entitra kokoa ny tompon'andraikitra amin'ny fandefasana ireny mpiasa Malagasy ireny???
Ny torohevitra arosoko ny vehivavy Malagasy dia izao : raha mbola azo atao dia aleo eto an-toerana ihany no miasa fa tsy hosodokan'ny karama kely (en euro) kanefa dia mihatra aman'aina ny asa atao.
Ry Fanjakana malagasy, aiza ny asa marobe nampanantenainareo ny malagasy tamin'ny fampielezan-kevitra??? Tompon'andraikitra ianareo amin'ny voina mahazo ireny vehivavy Malagasy ireny. Raiso ny andraikitrareo ary fefeo tsy hihitatra izao habibiana manjo ny vehivavy malagasy mila ravinahitra any ivelany izao.